Homeसमाचार‘डिभोर्स एनिभर्सरी’ मनाउँदै रमाइन् मनोज गजुरेलकी पुर्वपत्नी मिना ढकाल (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 27, 2020 admin समाचार 7032
विवाहको २३ वर्ष सम्म मैले क’हिल्यै म्यारीज एनिभर्सरी मना’उन पाइन । तर अहिले त्यो इच्छा पुरा गर्न नपा’एका कारण डिभोर्स एनिभर्सरी मनाउँदै आएकी छन् । सामाजिक सञ्जा’लमा निकै भाइरल मिना ढकालले सम्ब’न्ध विच्छेदको तीन वर्षको वार्षिक उ’त्सव मनाएकी छन् ।
उनले आफु स्व’तन्त्र भएको दिनका रुपमा वार्षिकउत्सव मनाउन थालेको बताएकी छन् । उनले मलाई म’नलागेको काम गर्न, मन लागेको कुरा बोल्न पाउने वाता’वरणमा आएका कारण आजको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा लिन चाहन्छु उनले भनिन्, त्यही भएर यसलाई वि’शेष प्रकारले मनाउन थालेकी हुँ । सामाजिक स’ञ्जालमा मिना ढकाल निकै सकृय छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जा’लमा लेखेका कुराहरुमा मिश्रित प्रति’क्रियाहरु आएपनि उनी निर्धक्क भएर आफ्ना मनका कुराहरु लेख्छिन् । उनी हास्य’कलाकार मनोज गजुरेलकी पु’र्वपत्नी हुन् । उनीहरुको सम्बन्ध बिच्छेद भएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ । त्यसैको अवसरलाई उनले वा’र्षिक रुपमा मनाउने गरेकी छन् ।
आज बिहानै मिनाले आफु स्व’तन्त्र भएको ३ वर्ष पुरा भएको भन्दै स्टाटस लेखेकी थिइन् । त्यो स्टाटस अहिले भा’इरल भइरहेको छ । स्टाटस मात्र हैन आफ्नो डिभोर्स एनिभर्सरी मनाउन उनी आश्रम पुगेकी छिन् । उनले पवित्र समाज सेवा नेपालमा गएर त्यहाँ रहेका बाल’बालिका तथा युवाहरुसँग समय बिताएकी छिन् । उनले शेयर गरेको भिडियोमा बिभिन्न मिष्ठान्न परिका’रहरु दिएर बच्चाह’रुसँग रमाएको देख्न सकिन्छ ।- इताजा खबरबाट
संक्र’मणबाट जनरल फिजिसियन डा. पशुपति रजौरियाको निधन
June 3, 2021 admin समाचार 3520
संक्रम’णका कारण युनिभर्सल मेडिकल कलेज शि’क्षण अस्पताल भैरहवामा कार्यरत एक चिकित्सकको मृ’त्यु भएको छ । मेडिकल कलेजका प्रशा’सकीय प्रमुख कमल ढकालका अनु’सार अस्पतालमा कार्यरत जनरल फिजिसियन डा. पशुपति रजौरियाको कोरोना संक्र’मणपछि मृ’त्यु भएको हो। ढकालले
May 3, 2021 admin समाचार 4592
February 2, 2021 admin समाचार 5652